DHL Paket 2.27.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.27.3 လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း DHL Paket
DHL Paket ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
• Aktualisierung der Favoriten in Ihrem DHL Kundenkonto
Vielen Dank, dass Sie DHL Paket und unsere Apps nutzen! Wir lesen jeden Play Store Kommentar und freuen uns über Ihr Feedback unter www.dhl.de/app-feedback.
အခမဲ့ app ကို DHL အထုပ်နှင့်အတူအဓိကအထုပ်န်ဆောင်မှုများအချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာလက်မှာ - ထိုကှကျတံဆိပ်ခေါင်း၏ဝယ်ယူရာမှတင်ပို့ခြေရာခံခြင်းရန်။ တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ဖောက်သည်အဖြစ်, သငျသညျအခွားသောအားသာချက်များလမ်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။
ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာများအပါအဝင်•။ Package ကိုခြေရာကောက်
တစ်တစ်ချက်မှာအပါအဝင်•အားလုံးတင်ပို့ရောင်းချမှု။ Delivery အချိန်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို
•စာအုပ် program တစ်ခုအဘို့အားလုံးရရှိနိုင်ပေးပို့ options များ - ရဲ့ login နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ
• 10 အစီအစဉ်များမှ Up ကိုကယ်တင် & စီမံခန့်ခွဲ
အဆိုပါသင်္ဘော၏• Push ကိုသတိပေးချက်လက်ရှိအနေအထားကို
• Shipmentstatus ရှေ့ဆက်
အသုံးပြုသူများသည် (www.dhl.de/anmelden မှတဆင့်မှတ်ပုံတင်) အတွက် logged အပြင်:
ကယ်တင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ 100 အစီအစဉ်များအထိ•
•ကို item နံပါတ်အများအပြား packages များ၏အလိုအလျောက် display ကို
•အမြိုးအစားခှဲခွားခွငျးလမ်း: Programs ကို "ငါ့ကိုစေရန်," နှင့် "ငါ့ကို မှစ. "
•ဂျာမနီနှင့်အီးယူအတွင်းသေးငယ်တဲ့ packages များနှင့်အထုပ်ပို့ဆောင်မှုများအတွက်စာပို့ခများဝယ်ယူ
•ရွေး-up, အမိန့်များဘွတ်ကင် function ကို
•ဒေသခံလိပ်စာစာအုပ် Access ကိုလက်ခံရရှိသူနှင့်ပေးပို့သူလိပ်စာများကိုရွေးဖို့
•လစာ function ကို PayPal ကနေတဆင့်
•စတိုးဆိုင်များတွင်သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးဘူတာမှမိုဘိုင်းအထုပ်အမှတ်တံဆိပ်အခမဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းများအတွက် QR ကုဒ်ကိုပြသရန်
• e-mail ကိုပုံနှိပ်သို့မဟုတ်တဆင့်ပို့ခြင်းအဘို့အ PDF အဖြစ်အထုပ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ Display ကို
•လှည်း DHL အွန်လိုင်း Frank ၏ Display ကိုပြီးခဲ့သည့် 30 ရက်
သင့်ရဲ့ DHL အကောင့်နဲ့စျေးဝယ်လှည်း DHL အွန်လိုင်း Frank ၏•ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနောက်ဆုံးရက်ပေါင်း 30,
•သင့် DHL အကောင့်အတွက်အကြိုက်ဆုံး၏ Update ကို
•အ DHL အထုပ် app ထဲမှာဝယ်ယူ packet ကိုအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ဆုကြေးငွေအချက်များကိုစုဆောင်း
•စာအုပ်အထုပ် box ထဲကသင့်ရဲ့ပြန်လာသို့မဟုတ်တံဆိပ်တုံးထုတ်လွှင့်နေတဲ့ပစ်ကပ် - အဘယ်သူမျှမပိုကုန်ကျစရိတ်မှာ
•တစ်တပ်မက်လိုချင်သောအ destination သို့ပေးပို့၏သတိပေးချက်သည်အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်ဘူတာရုံထုတ်လွှင့်ထုပ်ပိုး၏စတိုးဆိုင်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတွက် (မျိုးကွဲများအပါအဝင်။ MTAN)
•တည်နေရာသို့မဟုတ် packet ကိုစုဆောင်းခြင်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောရန်လိပ်စာပြရန်
•နောက်တဖန် mTAN တောင်းဆိုခြင်း
ပေးပို့အချက်အလက်များ၏ချက်ချင်းအကြောင်းကြားခံရဖို့တွန်းအားပေး Per •
activation code ကိုအားဖြင့်ဒေသ၏•တစ်ကြိမ် activation
• Packstationen-, Paketboxen- & လက်လီထွက်ပေါက်နှင့်ကှကျဆိုင်ရှာရန်မျိုးကွဲများအပါအဝင်။ ကြိမ်ဖွင့်လှစ်အပေါ်ပြန်ကြားရေး, အကွာအဝေးနှင့်အကွာအဝေး
•အဆင်ပြေ Card ကိုအသေးစိတ်စာရင်းမြင်ကွင်းအဖြစ်ရလဒ်များ
• GPS စနစ်-ကူညီရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ် input ကိုဖြစ်နိုင်သမျှ
•သင့် user data ကိုပြသရန်
• DHL Paket လက်လီထုတ်ကုန်များအတွက်နှုန်းထားများ
•အကူအညီန်ဆောင်မှုများ & အချက်အလက်များ: အမေးအဖြေများ, ဖောက်သည်အဆက်အသွယ် (ဖုန်း, Facebook, Twitter သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုချက်တင်) နှင့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်
• DHL အထုပ် box ကို app ကိုအဘို့ယူ-off: သင်၏ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူအစဉ်အဆက်ထက်သင့်ရဲ့အထုပ် box ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုသုံး
DHL အထုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ app များကို အသုံးပြု. များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျနော်တို့တိုင်းမှတ်ချက် Play Store ကိုဖတ်ပါနှင့် www.dhl.de/app-feedback မှာသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
DHL Paket အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
DHL Paket အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
DHL Paket အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
DHL Paket အား အခ်က္ျပပါ
rubystars စတိုး 5.48k 1.47M
DHL Paket ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း DHL Paket အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.27.3
ထုတ်လုပ်သူ DHL Vertriebs GmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.dhl.de/datenschutz
App Name: DHL Paket
Release date: 2019-08-17 08:12:52
လက်မှတ် SHA1: 81:22:0C:28:16:17:A4:94:6D:EF:FE:BA:A8:DC:96:18:2A:63:E4:88
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andree Kreienfeld
အဖွဲ့အစည်း (O): DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG
နယ်မြေ (L): Bonn
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Nordrhein Westfalen
DHL Paket APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ